Indawo yokuhlala yabakhenkethi VUT-CO-002537 ( A Casa do Campo) - I-Airbnb
Indawo yokuhlala yabakhenkethi VUT-CO-002537 ( A Casa do Campo)
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguJose Miguel
UJose Miguel yi-Superhost
Ukuqeshiswa kweNdlu-Apartment kunye neRejista yabakhenkethi i-VUT-CO-002537 yeemitha ezimalunga ne-50 square kwiziko lezembali laseFinisterre, malunga neemitha eziyi-100 ukusuka elunxwemeni, iimitha eziyi-30 ukusuka elunxwemeni. I-Plaza kunye ne-50 ukusuka kwizibuko.
Indlu inomgangatho ongasentla wegumbi lokulala eliyi-1, kunye negumbi lokulala eliyi-1 elineebhedi ezikhweleneyo, igumbi lokuhlala lasekhitshini-american, igumbi lokuhlambela eliyi-1, umatshini wokuhlamba impahla, i-ceramic hob, ioveni, i-tv..
I-Finisterre yonwabela ukutya okumnandi kunye nolwandle ukuze wonwabele ixesha lasehlotyeni.
I-Finisterre yeyona ndawo yesibini ityelelwe kakhulu eCciacia emva kweCathedral yaseSantiago de Compostela, ikwayindawo yokugqibela yeCamino de SANTIAGO apho amawaka abahambi bahamba beya ekugqibeleni ukuze batshise iimpahla zabo kwisithethe samawaka eminyaka eyadlulayo.
4.96 · Izimvo eziyi-124
I-Finisterre yilali ethobekileyo nethuleyo yokuloba, apho unokufumana khona ubuhlobo kunye nokubukwa kweendwendwe kwabantu bayo kunye neendawo ezinomtsalane onokutyelela kuzo okanye iivenkile zokutyela eziphambili apho unokutya khona okona kutya kumnandi kwaselwandle eCciacia
Umbuki zindwendwe ngu- Jose Miguel
Iindwendwe zam ziye zandifumana imini nobusuku ngemiyalezo kaWhatsApp okanye nge-app ka-Airbnb
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Fisterra